[Tribune] Doorashadii madaxweynenimada ee Tuniisiya: markii dooddu dhammaato - JeuneAfrique.com - WAA LA DILAY
ACCUEIL » SIYAASADDA »[Tribune] Doorashada madaxtinimada ee Tuniisiya: Markay noqoto doodaha - JeuneAfrique.com
Weligeed siyaasaddu ma aysan soo marin meherad noocaas ah oo warbaahintu weligeedna ma aysan dhicin meel siyaasadeed oo sidan oo kale ah. Saxaafadda guud ama barta internetka oo dhan, siyaasadaha ayaa jira meelwalba, marwalba, xitaa sida kalsooni darrooyinka ay u qabaan.
Siddeed sano ka dib kacaankii, rajadii mudaaharaadka waxay fursad u siisay dib-u-habeyn reebitaan. Sixirooyinka ballanqaadku mar dambe ma shaqeeyo: argaggixisannimada, xiisadda dhaqaale, maalgashiga maalmo-yar iyo tiro yar oo dowlado ah ayaa ku filnaatay inay ka dhigaan waddankii sharciga ahaa mid dimoqraadi ah, oo la barbar dhigo dimuqraadiyadihii hore ee la tijaabiyey.
Dabaylkan wareegga xorta ah ee saxaafadda iyo hadalka, isgaarsiinta siyaasadeed ayaa lagu casuumay miiska awoodda. Saamiyada Dunida Hore, waxay noqotay hubka lama huraanka u ah kuwa doonaya xukunka. Xulkii doorashada ee 2011 iyo dagaalkii 2014 ee wada-galayaashu halkaas ayey ku dhaafeen. Ma jiraan su’aalo dheeraad ah oo ku saabsan waxbarashada, caafimaadka, beeraha, ecology, wareejinta tamarta, mustaqbalka Midowga Afrika ... Doodaha fikradaha? Dhibbanaha koowaad ee wada xiriirka siyaasadeed.
Neo-tababaray loona keenay
Muuqaalku waa "ganacsi faa'iidooyinka", maahan wax lala yaabo Nabil Karoui, oo ah muruq warbaahin iyo isgaadhsiinta, waxay dejisay goobaha codbixinta ee codbixinta doorashooyinka soo socda. Fikrad la'aan ama barnaamij la'aan, waxaa lagu amaanayaa cuqdada bulshada ugu liidata, haweenka reer miyiga ah iyo dadka aan wax qorin waxna akhrin, bartilmaameedyada doorashada silsilad si wanaagsan ugu adeegaysa. ganacsiga samafalka inta u dhaxaysa laba marxaladood oo ka mid ah qalliinka saabuun ee Turkiga. Isaga oo korkiisa saaran Karoui wuxuu ciyaaraa Robin Hood : midka u qaada magaalooyinka si uu ugu qaybiyo ololayaasha. Ganacsadahan ayaa warbaahintiisa u rogay goob siyaasadeed. TV-ga Nessma, sumcadda u tartameyaasha ama xulafada kale ee Karoui waa la sameeyay oo waa laga joogsanayaa.
Aïch Tounsi wuxuu ka dhex muuqdaa nolosha maalinlaha ah ee muwaadiniinta oo malaayiin dinaar ah ku kharash gareeyay iibsashada boosaska xayeysiinta
Mid kale neo-populist UFO oo leh ballanqaad isbeddel xag-jir ah ayaa degay muuqaalka. U ololeeynta gadaashiisa maaskaro, Aïch Tounsi waxay ka muuqataa nolol maalmeedka muwaadiniinta oo malaayiin dinaar ah ku kharash gareeyay iibsashada booska xayeysiinta. Qoraallada lagu soo jeediyay Facebook, ayaa muujinayainfotainment la xoreeyay oo loo beddelay infomercial: qofna kama baxsan karo xumaha. Codbixinta ayaa saadaalineysa in "ururka" uu ku wareejin doono daraasiin kursi oo ah doorashooyinka sharci dejinta ee 6 October.
Laakiin musharixiinta dabaqada badan ayaa had iyo jeer yaqaan sida loo isticmaalo khiyaamadihii hore ee ganacsiga: isku dhaca. Abir Moussi Wuu sarreeyaa. Remnants ee nidaamkii hore, waxay ku jebisay booskeedii iftiiminta iyada oo jeedinaysa khudbad xag jir ah oo aftahan ah. Qaabka Trump, Salvini ama Le Pen, waxay leedahay falka loo yaqaan 'incisive incite', habka loo yaqaan 'scathing formula'. Calaamadeeyna sumadda markasta oo ay muuqato warbaahinta.
Carni-siyaasadeedkan siyaasadeed, in cod-bixiyayaasha la dhageysto waxay noqotay hawl adag. Kordhinta iyo xaaqidda ka dibna u ekaan sidii guddiyada badbaadada gaarka ah. Ma jiro musharrax looga badbaaday anathemas-ka. Dhamaan "wakiilada hurdada ee Islaamiyiinta" ama "henchmen of Israel". Maalin kasta dushiisa sunta. Facebook-ga, montages Photoshop ayaa wasakheeyay dooda dadweynaha Isku dhacyadaas dhexdooda, kalsoonida jilicsan ee ka dhaxaysa siyaasada iyo muwaadiniinta ayaa ku hanjabaya inay burburayaan. "Calumniate, caytanka, had iyo goor wax baa jira ayaa haray," Francis Bacon ayaa qoray qarnigii 17aad. Wali waan joognaa.
Marka laga soo tago dhaqamadaan, laba nin oo caqli gal ah oo lagu tilmaami karo kuwa dhaliisha ayaa abuuri kara yaab. Oo ka soo horjeedda "wada xiriirka". Dhinac Kaïs Saïed, oo ah garsoore hawl-gab ah oo hawl-gab ah isla markaana hore u ahaa macallin jaamacadda Sousse. Dhanka kale, Abdelkrim Zbidi, Wasiirkii hore ee Gaashaandhiga. Qaab dhismeedkooda waxbarista, waxay u jiheeyaan dhagaystayaasha ugu aqoonta badan. Saciid wuxuu codsanayaa dhalinyarada qalin jabisay ee shaqo la'aanta ah wuxuuna dalbanayaa muxaafid. Dhanka Zbidi, wuxuu dammaanad qaadayaa fulinta iyo odayaasha. Ujeeddadooda "anti-com" waa maqaal u qaadasho daacad ah oo ka dhex dhaca cod-bixiyeyaasha.
Natiijooyinka doorashooyinka soo socda ma xallin doonaan oo keliya su'aasha hoggaanka siyaasadeed ee Tuniisiya. Waxay sidoo kale yeelan doonaan qiime cashar u leh xiriiriyeyaasha nooc kasta. Qarxintu miyey sababi doontaa miyir-qabka? Sidoo kale waa su'aashan dadka reer Tunisiya lagu casuumay inay ka jawaabaan.
Dagaal hubinta DRC: saddexda dacwadood ee udub dhexaadka u ah IGF iyo madaxtinimada - JeuneAfrique.com